တော်လေးတော် ဖြစ်လာရတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ သဘာဝ
ပင်မနေရာ အထူးသတင်း တော်လေးတော် ဖြစ်လာရတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ သဘာဝ
တော်လေးတော် ဖြစ်လာရတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ သဘာဝ	Thursday, 05 July 2012 00:00	User Rating: / 20
PoorBest ??????????? ??????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ????????????? ???? ????????????
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ယခင်က ကိုယ်တိုင်တော်၊ အဖားတော်၊ အမျိုးတော်ဆိုပြီး တော်သုံးတော်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကား ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရာရှိတွေဟာ အဲဒီ တော်သုံးတော်ထဲက အဖားတော်နဲ့ အမျိုးတော်တို့နဲ့ဘဲ လုံးပန်းနေရပြီး ကိုယ်တိုင်တော်ဆိုတဲ့ တော် တစ်မျိုးကတော့ နောက်ဆုံးမှာဘဲ ရှိနေပါတယ်။ နအဖခေတ် လက်ထက်မှာတော့ မိမိ အကြီးအကဲကို ဒုက္ခပေးမဲ့သူ၊ အန္တရယ်ပေးမဲ့သူ ဖြစ်လာရင် ဇာတာအရ စစ်ဆေးလိုက်ပါက ဘယ်လိုဘဲ တော်သုံးတော်ထဲမှာ အကျုံးဝင်နေပါစေ ချောင်ပို့လိုက်တာ များပါတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ဟာ လင်တော်မောင် ဦးသန်းရွှေကို အကျိုးပေးမဲ့သူ၊ အနစ်နာခံမဲ့ သူမျိုးကိုသာ သေသေချာချာ တွက်ချက် စီစစ် ရွေးချယ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယနေ့ခေတ် မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ အရာရှိတွေ နှုတ်ဖျားမှာ ရေပမ်းစားနေတာကတော့ ဇာတာတော်ရမယ် ဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာသား ဦးသန်းရွှေနဲ့ အလွမ်းသင့်ရမယ် ဆိုတာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။ အရာရှိကြီးကတော်တွေဟာ ဗေဒင်ယတြာ ဘိုးတော်၊ အောက်လမ်းနည်း၊ အထက်လမ်းနည်းတွေကို အင်မတန်မှ ယုံကြည်စွဲလမ်းကြီးကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်က န၀တ အတွင်းရေးမှူး (၃) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၀င်းမြင့် ဆိုရင် ခမရ (၁၈) တပ်ရင်းမှူးဘ၀တုံးက ရှေ့တန်း ထွက်ခိုင်းတဲ့ရက်ဟာ ပြဿဒါးရက် ဖြစ်နေလို့ တပ်ရင်း တစ်ရင်းလုံး တပ်ခြံစည်းရိုးမှ တရက်စောထွက်ပြီး စာသင်ကျောင်း ဘောလုံးကွင်းမှာ သွားအိပ်ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ စစ်သည်တွေက ပြောပါတယ်။ ရှေ့တန်းထွက်ရင် ယတြာချေတဲ့အနေနဲ့ ဆူးခက်တွေ ချထားတဲ့ သစ်ရွက်သစ်ကိုင်းတွေကို နင်းပြီးမှ ရှေ့တန်းထွက်ရပါတယ်။ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ လင်တော်မောင်ဟာ ယခင်က ရှင်ဘုရင်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုလို့ ရှေးခေတ်ဘုရင် အသုံးအဆောင်များအတိုင်း အဆောက်အဦး ပြဿဒ်တွေကို နေပြည်တော် အဆောက်အဦးတွေမှာ သုံးခိုင်းတာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေ့ရင် ဧည့်ခန်းမှာ ဖျာခင်းကော်ဇောခင်း ထိုင်ခိုင်းပြီး သူတို့ကတော့ ဆိုဖာတွေပေါ်မှာထိုင်ပြီး နာမ်နှိမ်တဲ့ သဘောနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွှန့်တောင် န၀ဒေးမှာ နေခဲ့စဉ်တုံးက အဲဒီလို ဖြစ်စဉ်မျိုး ကြုံတွေ့ခဲ့လို့ နောင်ဘယ်တော့မှ အိမ်တော်ကြီးကို မသွားတော့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နာမ်နှိမ်ဖို့ ကတ်ကင်းအနေနဲ့ ကြက်ဆူပင် စိုက်တဲ့ကိစ္စဟာလည်း ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ ပယောဂ မကင်းကြောင်း သိရပါတယ်။
နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်များကို ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးရင် အစဉ်အလာမရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းဘုရားအား ဦးခိုက်စေတာဟာလည်း အစီအမံ တစ်မျိုးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ မြေးတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘိုးတော်ကြောင့် အောက်လမ်းနည်းနဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေဟာ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အဖို့ အငိုက်မိသွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေါသူပုန်ထပြီး ဦးနေ၀င်း အလောင်းကိုတောင်မှ ရေမျောခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန် ကုန်းမြင့်သာမှ ၀န်ကြီးတွေ တောဇနပုဒ် ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်ကို ပြောင်းရွေ့ဖို့ နိုဝင်ဘာ (၁၁) ရက် ၁၁ နာရီလိုမျိုး နေ့ရက်အချိန်အခါ ရွေးတဲ့အခါမှာလည်း ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ အစီအမံ မကင်းဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ဒါတွေဟာ ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာသမားများအပြင် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသား ဘိုးတော်ဝင်စားသူတစ်ဦး လွှမ်းမိုးမှုလည်း သိရပါတယ်။
ဦးသန်းရွှေရဲ့ ကိုယ်ရံတော် အရာရှိ တစ်ဦးဟာ ဗေဒင်ဇာတာအရ စိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် နေချင်းညချင်း ပြောင်းရွေ့သွားရဖူးပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းဟာ အစဉ်အလာရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်များကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အတွင်းရေးမှူး (၁) ကနေ ၀န်ကြီးချုပ်အထိ ထိုးတက် သွားရတာဟာ ဇာတာခွင်တော်တဲ့အချက် တစ်ချက် ပါဝင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ဟာ ဇာတာခွင် စစ်ဆေးမှုမှ အောင်မြင်ခဲ့တာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မကြာသေးမှီကလေးကမှ ဦးသန်းရွှေတစ်ယောက် နာမကျန်းဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ အကုသိုလ် ၀ဋ်ကြွေးများကို ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် တစ်ယောက်ဆရာသမားတွေရဲ့ အစီအမံက ကျော်လွှားနိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း စစ်ဖက်နီးစပ်သူများက စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ် www.photayokeking.org သို့ သတင်းပေးပို့လာပါတယ်။
Last Updated ( Wednesday, 03 April 2013 16:17 )